Akụkọ - 2020, nwere ike ịbụ afọ nke mmegide Bitcoin
N'oge na-adịbeghị anya, ọ dị ka Bitcoin nọ na nsogbu. Agbanyeghị na ọnụego Bitcoin yiri ka ọ na-agbanwe agbanwe nke ukwuu, mkpuchi a anọwo na oge nkwado na izu abụọ gara aga, ka m mechara kụrụ nnukwu $ 7,470. Na-efegharị n'etiti mpaghara dị elu nke $ 6,000 na mpaghara dị ala nke $ 7,000. Ọzọ, ebee ka Bitcoin ga?
Ruo ogologo oge, ndị mmadụ enweela obi abụọ banyere uru dị mkpa nke cryptocurrencies. Ha depụtara ọsọ ọsọ azụmaahịa Bitcoin, "Ethereum hacks, na" adịghị ike "ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ, na-ekwu na klas ndị a enweghị ọdịnihu. Agbanyeghị, n'ụwa taa nke jupụtara n'ọgba aghara, mbara igwe na-emepe emepe, ọkachasị cryptocurrencies, ọkachasị Bitcoin.
Dabere na akụkọ Bloomberg bipụtara, Bitcoin na-ewulite ike maka ahịa oke ehi. Akụkọ ahụ kwusiri ike na 2020 ga-abụ afọ mgbe Bitcoin ghọrọ ọlaedo dijitalụ. "Afọ a bụ ule dị mkpa nke mgbanwe Bitcoin na ego dị ka ọla edo, anyị na-atụ anya na ọ gafere ule a."
Onu ogugu ndi mmadu nwere mmasi na blockchain na cryptocurrency na-abawanye
Dabere na nyocha nke Paxful duziri, uwa ahia P2P bitcoin ahia, ndi America ndi nwere ihe omuma banyere nkpuru ego egosiputa mmasiwanye na teknụzụ blockchain na cryptocurrencies. Ndị otu a na-elewanye akụ dijitalụ anya dị ka onye nnọchi maka usoro ego ego "nwere nkwarụ".
Dabere na akụkọ nyocha ewepụtara na Eprel 23, cryptocurrency na-eto dị ka akụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ndị zaghachiri kwenyere na mberede n'ime usoro ego ọdịnala ga-abụ ohere iji nyere ndị mmadụ aka ịgbado uche ha na Bitcoin dị ka ihe ọzọ.
Dị ka nnyocha ahụ si kwuo, ụzọ kachasị eji Bitcoin eme ihe gụnyere ịkwụ ụgwọ ndụ n'ezie (69,2%) na ịlụ ọgụ maka mmụba na nrụrụ aka (50,4%).
Artur Schaback, onye isi ndị ọrụ na ngalaba nke Paxful, kwuru na N'ajụjụ ọnụ: "Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ọtụtụ ndị kwenyere na a ga-enwetakarị nnabata ụmụ nwanyị n'ime afọ 6 ruo 10 na-esote. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị zaghachiri kwenyere na otu Afụ cryptocurrency ahụ ga-agbawa n'ime obere oge. Enwere m olile anya maka ọnọdụ izizi, yabụ echere m na dịka ụlọ ọrụ, anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ịmepụta ngwaahịa ndị ọzọ ma tinye ngwaahịa ndị ọzọ n'okwu ikpe ndụ n'ezie. Nyere aka mee ka usoro nkuchi nke ụmụ mmadụ mezie ngwa ngwa. ”
N'ihe gbasara oke okpueze ohuru zuru ụwa ọnụ, Paxful kwenyere na a na-anwale ma cryptocurrency na usoro ego ọdịnala, nke na-akọwa ruo n'ókè kpatara ọnụahịa BTC na-ebili ka BTC na-aghọ ihe nchekwa-nchekwa.
Schaback kwusiri ike na ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nke mbụ, o doro anya na mmata ndị mmadụ banyere Bitcoin ka elu ugbu a. “Echetara m mgbe mbụ anyị bidoro, ọ nweghị onye matara gbasara Bitcoin ma ọbụnadị chee echiche banyere okwu ahụ bụ‘ Bitcoin ’. Agbanyeghị, site na nsonaazụ nyocha afọ a na afọ gara aga, ọtụtụ mmadụ anụla banyere Bitcoin. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ejikọ ya na echiche dị iche iche dị ka ego na teknụzụ. Anyị ka nwere nnukwu ọrụ anyị ga-aga, ma achọrọ m ịhụkwu ihe ndị ga-enyere anyị aka. ”
Banyere ihe na-egbochi nnabata, nyocha ahụ kwusikwara ike na 53.8% nke ndị zaghachiri kwenyere na enweghị ezigbo ihe ọmụma na-egbochi mgbasa ozi nke cryptocurrencies.
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ndị zaghachirinụ kwenyere na isi ihe ndị na-enyere aka ịbawanye nnabata nnabata bụ ngagharị nke ekwentị, mgbake nke altcoyins, itinye ego na ụlọ ọrụ na iji ụlọ ọrụ nke teknụzụ blockchain.
Paxful’s COO kwuru banyere nsogbu a ga - enwe n’ọdịnihu: “Ihe ịma aka kasịnụ bụ ka ịmara banyere cryptocurrency n’onwe ya. Anyị maara na ọtụtụ ndị mmadụ anụwo banyere ya, mana echere m na ọ bụ ihe kpatara ya, dịka ịgba chaa chaa na ọkwa ojoro. N'ihi nke a, ndị na-ege ntị na-atụkarị ụjọ. Dị ka ụlọ ọrụ, nke a bụ nnukwu nsogbu anyị. ”
Ọdịnihu Bitcoin na-aga n'ihu na-agbake
Mgbe ị nwetachara ụda olu na izu ole na ole gara aga, ọnụego azụmaahịa Bitcoin amalitela ịlaghachi. Dabere na data ọhụrụ nke CME, ngwaahịa ya rutere ọhụụ ọhụrụ n'ọnwa gara aga n'ihe banyere akaụntụ ndị na-arụ ọrụ, yana mmụba mmụba kwa afọ nke 161%.
Dabere na akụkọ, onye nchịkwa US, Securities and Exchange Commission (SEC) kwadoro na Medallion Fund (Medal Fund) n'okpuru Renaissance Teknụzụ nwere ike ịbanye ugbu a na-aga n'ihu Bitcoin n'ọdịnihu ahịa. A maara ego a maka arụmọrụ nlọghachi ego ya pụtara ìhè n'afọ a.
Dị ka ozi ahụ si kwuo, Renaissance Technology ga-enye CME Group ego nkwekọrịta bitcoin n'ọdịnihu, CME bụ otu n'ime ndị mbụ na-enye bitcoin n'ọdịnihu.
$ 10 ijeri oke mkpuchi n'okpuru Renaissance emeela aha na mgbasa ozi n'oge na-adịbeghị anya. Agbanyeghị na okpueze okpueze ọhụrụ etinyela ahịa ụwa niile n'ọgba aghara na-aga n'ihu, ego ahụ enwetala 24% uto n'afọ a. Dabere na CNBC, njikwa njikwa nke Medal Fund bụ ihe ruru ijeri US $ 10, nke ihe ruru ijeri RMB 70. E mere atụmatụ na a ga-ahazi ihe ruru ọtụtụ ijeri dọla, ego a na-enweta n’afọ a bụ ihe dị ka ijeri dọla 3.9, nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri yuan 30; mgbe ha gbupụsịrị ụgwọ njikwa na ịkekọrịta arụmọrụ, ego a nwere uru ruru ihe ruru ijeri dọla 2.4, nke ihe ruru ijeri yuan 17
Dabere na Wall Street Journal, site na Eprel 14, ego medallion nwere mkpokọta mkpụrụ nke 39% afọ a. Ọbụna na ahịa March “Great Falls” na Buffett ahụbeghị n'oge ndụ ya, Medal Fund ka na-enweta 9,9%. N'otu ọnwa ahụ, S & P 500 dara 12.51%, na Dow dara 13.74%, ha abụọ na-ada nnukwu mbibi kwa ọnwa kemgbe October 2008.
Obi abụọ adịghị ya na ego ego medallion a, nke na-efunahụghị ego kemgbe mmalite ya ma nwee ike nweta nloghachi ụbọchị n'oge nsogbu akụ na ụba, na-anọchi anya nnabata isi obodo ọdịnala na ahịa cryptocurrency, ọ ga-ewetakwa nnukwu uru maka CME Bitcoin n'ọdịnihu ahịa. mmiri mmiri.
Unlimited easing amụma nwere ike ịkpali Bitcoin counterattack
Agbanyeghị ike nloghachi siri ike na ọnụ ahịa ego, gụnyere cryptocurrencies, atụmanya maka akụ na ụba ụwa ka na-echegbu onwe ya. N'ime izu ise gara aga, ndị ọrụ nde 26 etinyela akwụkwọ maka enweghị ọrụ na United States naanị. Na ọkwa ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ nyocha na-atụ anya na ụlọ ọrụ ga-efunahụ ọtụtụ ijeri dollar na ego ha nwetara.
Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ụlọ akụ etiti na gọọmentị gburugburu ụwa agbaala mbọ ịchekwa ndị mmadụ, ụlọ ọrụ, na ụlọ ọrụ niile.
Iji belata egwu nke ndalata akụ na ụba nke United States chere n'ihi mmetụta nke ọrịa ahụ, Fed enwebeghị "nnukwu mbugharị" na-enwetụbeghị ụdị ya. Na mgbede Machị 15, Fed kpụrụ ọmụrụ nwa na efu wee bido nnukwu mgbatị pụrụ iche nke US $ 700. Na Machị 17, Federal Reserve bidoro thelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ego Azụmaahịa (CPFF) na Primary Dealer Ebe E Si Nweta Mechanism (PDCF) iji nye ndị na-ewepụta akwụkwọ azụmahịa. Na Machị 23, Federal Reserve nyere iwu enweghị ego (QE) na - akparaghị ókè wee bido “zụta” ihe niile ahịa akwụmụgwọ n’ahịa belụsọ maka ebuka iji nye nkwado zuru ezu maka ahịa.
Ọtụtụ mmadụ kwenyere na omume nke Fed ahụ gosipụtara naanị mkpa ọnọdụ US.
Bank of Japan (BOJ) gosipụtara omume a. Dabere na Nikkei Asian Review, na-ekwu maka ndị maara nke a nke ọma, Bank of Japan na-achọ nzụta na-enweghị njedebe nke agbụ gọọmentị Japan iji kpalie akụ na ụba. Ọ na-atụ anya ịbawanye mmemme mmemme udo ya ka okpukpu abụọ nke ịzụ nkekọ ụlọ ọrụ na akwụkwọ azụmahịa.
Ọ bụ ezie na United States amalitela mmemme ịzụ ahịa nkekọ, Max Bronstein, onye otu ndị otu na-ahụ maka itinye ego itinye ego na mgbanwe ego cryptocurrency, Coinbase, kwusiri ike na "usoro dị ugbu a dara kpamkpam."
Ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na akụ akụ na-enweghị ego na nke na-adịchaghị mma ga-erite uru site na omume a gbasara ego na akụ na ụba amaghị ma e jiri ya tụnyere ego ego nke etiti.
Onye bụbu onye isi ọrụ Goldman Sachs na onye njikwa ego oke Raoul Pal kọwara na akwụkwọ Eprel nke akwụkwọ akụkọ "Global Macro Investors" na ọ na-eche na anyị nwere ike ịhụ "usoro ego anyị dara" ma ọ bụ "usoro ego ugbu a dara." “.
Bitcoin ga-erite uru dị ukwuu site na mgbanwe site na usoro iwu gaa usoro okike dijitalụ. Banyere Bitcoin, Pal dere, sị: “Nke a bụ usoro zuru ezu, nke a tụkwasịrị obi, nke a kwadoro, nke nwere nchebe, nke ego, na nke ego. Ọdịnihu nke usoro azụmaahịa anyị niile, ego ahụ n'onwe ya na ikpo okwu ya anaghị akwụsị ebe ahụ. “
Ọ gbakwunyere na Bitcoin nwere ike iru $ 100,000 n'ime afọ abụọ sochirinụ, ọbụnakwa tụfuo okpu $ 1 mgbe echiche macro gbanwere n'ụzọ dị egwu.
Mgbe usoro iwu a "na - akparaghị ókè easing", Bitcoin ọ ga - abụ "ihe nchekwa-nchekwa akụ" n'okpuru nsogbu ego? N'akụkụ a, Mike Novogratz, onye isi oche nke Galaxy Digital, bukwara amụma na Bitcoin nwere ike ịgbaso ọla edo na nnukwu mmeri dị oke mkpa, ọkachasị n'ihi na akụ abụọ a dị ụkọ.
Xu Yingkai, onye guzobere BlockVC, kwuru na Weibo na 3,800 USD nke Bitcoin nwere ike ịbụ ala nke ọdịda ahịa ahụ. Mgbe ọkara Bitcoin (ọnwa 1-2 gachara), ahịa ahụ malitere ịgbake kpamkpam. Mgbe emechara ọkara ahụ, n'ihi oke ọnụ ọnụ Mbelata nke ego ga-etinye uche na ndị na-egwupụta akụ, mana ahịa ahịa ọ bụla na-ere kwa ụbọchị amụbawokwa okpukpu abụọ kwa afọ, na "ọnwụ ọnwụ" na-atụ anya ka nke nta nke nta belata .
Otú ọ dị, ụfọdụ ndị nọ n’ụlọ ọrụ ahụ rụtụrụ aka na “akụ na ụba nchekwa” bụ echiche ochie, mana ịtụle na Bitcoin nwere nnukwu ahịa na mmiri mmiri ya siri ike karịa ụdị ọdịnala ndị ọzọ, ọdịnihu ga-aga n’ihu na-ebili. Ya mere, mgbe okuku ahụ gasịrị, Bitcoin ga-agbake ngwa ngwa karịa akụ ndị America ọdịnala. Site na nke a, Bitcoin ka nwere ike inwe atụmanya ka mma, mana site na ahịa ahịa ugbu a, enweghị nsogbu ọ bụla.
N'ezie, mgbe oge dị mkpirikpi daba na Bitcoin, ọnụahịa a dị ezigbo mma na ọkara na ogologo oge, ọ nwere ike ịbụ mmalite maka ahịa ehi na-esote.
Bitcoin na-achịkọta ike maka ahịa ahịa ehi n'ọdịnihu
Otu akụkọ nke Bloomberg bipụtara kwuru na Bitcoin na-enwe ike maka ahịa ehi. Ọbụna isi akụkọ nke akụkọ ahụ gosipụtara echiche doro anya bullish- "Bitcoin Maturity Great Leap Forward". Bloomberg kwenyere na n’afọ a Bitcoin ga-emecha ule dị mkpa nke mgbanwe gaa n’achụ-ego dịka ọla edo.
Akụkọ ahụ kwuru ọtụtụ ihe kpatara na ahịa Bitcoin na-eto eto. Akụkọ ahụ kwadokwara na “ọ bụrụ na enwere ike iji akụkọ ihe mere eme dị ka ihe nduzi, Bitcoin na-enweta mmanụ ọkụ ọzọ ka ahịa ngwaahịa na-amalite.”
Na mgbakwunye, Bloomberg kwuru na Bitcoin na ọla edo, akụ abụọ nwere nchekwa n'anya ndị mmadụ, na-atụ anya irite uru kachasị na ọgba aghara ahịa na-adịbeghị anya nke ọrịa okpueze ọhụrụ ahụ kpatara.
Mana dị ka onye nyocha ama ama ama ama banyere cryptocurrency, ọ bụrụ na Bitcoin rute ebe ọnụahịa dị, o nwere ike ibute ahịa, yabụ, ọnụ ahịa ego rịrị elu.
Saturdaybọchị Satọde gara aga, ndị na-eso ụzọ Twitter 200,000 na onye ahia aha ya bụ CryptoYoda wepụtara usoro nyocha ọhụụ ọhụụ ya, bụ nke ọ kọwara na usoro ahịa Bitcoin na-ada ada n'ihi nguzobe ebumpụta ụwa na ubu-akara ngosi bearish abụọ akọwapụtara site na Akwụkwọ ọgụgụ-ma ihe itunanya nke Bitcoin nke $ 7475 ga-agbanwe ọnọdụ a, “na-amanye mkpụmkpụ iji kpochapụ ọnọdụ ha ma na-agba ume ịzụrụ ọnọdụ ndị a”:
"Ọganihu dị na ọkwa dị elu dị otu a ga - eduga na mkpụmkpụ mkpụmkpụ buru ibu, yana olu ịzụta ihe ga - eme ka ọ laa azụ siri ike, ọkachasị ma ọ bụrụ na ndị na - azụ ahịa abanyeworị site na ọkwa mgbochi dị ala gara aga."
Ihe ọ chọrọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ na Bitcoin emebie nke ọma, ọ nwere ike igosi na azụmaahịa dị n'akụkụ ugbu a abụghị ihe ngosi nke elu, mana usoro nkwado na ịga n'ihu na-aga, nke nwere ike iru $ 8,000 ma ọ bụ karịa karịa.
Avi Felman-onye ahia na onye nyocha na ego mkpuchi ego BlockTower-hụrụ akara ngosi teknụzụ abụọ na Fraịde gara aga nke gosipụtara n'ụzọ doro anya na ọnụahịa Bitcoin ga-enweta mgbazi n'oge na-adịghị anya:
Demark usoro (Tom Demark Sequential) bụ ihe ngosi na-egosi oge, na ihe osise oriọna ụbọchị 3 na-egosi usoro na-aga n'ihu nke ire ere. Otu ọnọdụ ahụ mere n'oge abụọ gara aga mgbe ọnụahịa ego gbadara n'etiti ọnwa Machị na Disemba 2019, mana ọ ruru n'elu $ 10,500 tupu afọ a.
Ethereum dị ugbu a na-enweghị ike ịkwụsị site na ụbọchị 50 na ụbọchị 200 na-agagharị na mbugharị nke ụbọchị atọ kandụl.
Na mgbakwunye, DonAlt kwuru na agbanyeghị na usoro a na-eme kwa ụbọchị egosighi "usoro mgbada siri ike", ọ "dị nso na mkpughe nke Bitcoin n'isi nke $ 10,000." O gosipụtara na usoro ọnụahịa nke Bitcoin dị iche na nke ahụ na February yiri nke a na nhazi ugbu a.
Otu akụkọ Bloomberg "Bitcoin Maturity Jump" kwuru na Bitcoin na-akwadebe maka nnukwu ahịa ahịa ehi. Na akụkọ ahụ, onye edemede ahụ kọwara n'ụzọ doro anya na mmekọrịta dị n'etiti Bitcoin na ntinye S & P 500, ọla edo, efu na ọnụego ọmụrụ nwa na-adịghị mma. Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ọgba aghara ahịa ahịa na-eme ka mgbanwe nke Bitcoin gaa "ọlaedo dijitalụ".
Na 2020, a ga-ekpebi ma Bitcoin nwere ike ịgbanwe site na akụ dị egwu dị na "ọla edo dijitalụ". Site n'echiche nke ike, o yiri ka volatility Bitcoin ajụla, ebe ahịa ahịa ngwaahịa amalitela ịrị elu. Omume ahịa dị otú ahụ ga-emekwa ka ọtụtụ ndị mmadụ nyefee ego na akụ ezoro ezo.
btc akpa, obere akpa, mkpuchi crypto asic, antbox akpa, eji akụrụngwa akụrụngwa crypto, antminer akpa,